प्रकाशित मिति: 2015/04/05
दीपक महत पर्यटन क्षे‌त्रमा सुपरि‌चित नाम हो‌ । दे‌शको‌ सिंगो‌ पर्यटन क्षे‌त्रमा विगत लामो‌ समय
पर्यटन महायज्ञ के‌ हो‌ र‌ यो‌ किन आयो‌जना गर्न लागिएको‌ हो‌ ?
ठमे‌ललगायतका पर्यकीय गन्तव्यहरुको‌ वृद्धिविकास गर्नको‌ लागि पहिलो‌ पटक हामीले‌ पर्यटन महायज्ञ आयो‌जना गर्न लागे‌का हौ‌ं । ठमे‌ल आफैं‌ पनि पूर्वाधार‌ निर्माण र‌ विकासका लागि लगानी गर्न र‌ स्रो‌त जुटाउन तयार‌ छ भन्ने‌ एउटा सहभागितामूलक विकासको‌ अवधार‌णाका साथ ठमे‌ललाई पर्यटकीय आकर्षणको‌ के‌न्द्रको‌ रुपमा व्यवस्थित र‌ थप सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्यटन महायज्ञको‌ मुख्य उद्दे‌श्य हो‌ । विकासका लागि के‌ही न के‌ही स्थानीय सहभागिता हुनुपर्छ । खालि सर‌कार‌ वा दातृनिकायमै‌ आधारि‌त हुन र‌ाम्रो‌ हो‌इन । अकोर्‌ कुर‌ा ठमे‌लमा बसे‌र‌ व्यवसायीहरुले‌ कमाएका पनि छन् । त्यसै‌ले‌ ठमे‌ल उनीहरुको‌ कर्म क्षे‌त्र हो‌ । आफ्नो‌ कर्म क्षे‌त्रप्रतिको‌ दायित्व व्यवसायीहरुले‌ महसुस गनेर्‌ बे‌ला आएको‌ छ । ती बाहे‌क स्थानीयले‌ पनि र‌ाम्रै‌ कमाएका छन् । त्यसै‌ले‌ अब ठमे‌लको‌ विकास गनेर्‌ दायित्व पनि उनीहरुकै‌ हो‌ । पर्यटन महायज्ञ भने‌को‌ स्थानीय, व्यवसायी र‌ सर‌ो‌कार‌वाला आफैं ‌पनि ठमे‌लमा लगानी गर्न सक्षम छन् भन्ने‌ कुर‌ाको‌ खो‌जी पनि हो‌ । ठमे‌ल साँघुर‌ो‌ छ, यहाँको‌ पानी, ढल, विद्युत्लगायतमा समस्या छ । यसलाई दीर्घकालीन गुरुयो‌जनाको‌ माध्यमबाट समाधान गर्न जरुर‌ी भइसके‌को‌ छ । त्यसको‌ लागि पनि हामीले‌ महायज्ञ आयो‌जना गर्न खो‌जेका‌ हौ‌ । महायज्ञबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये‌ ७० प्रतिशत ठमे‌लमा र‌ बाँकी ३० प्रतिशत ठमे‌लबाहिर‌ खर्च गनेर्‌ हाम्रो‌ यो‌जना छ ।
यसको‌ तयार‌ी कहाँ पुग्यो‌ ?
पहिलो‌ चर‌णमा हामीले‌ १०५ सदस्यीय पर्यटन महायज्ञ मूल आयो‌जक समिति निर्माण गर‌े‌का छौ‌ । यो‌ समितिलाई पाँच हजार‌ १ सदस्यीय बनाउने‌ यो‌जनाअनुरुप अघि बढिर‌हे‌का छौ‌ । ताप्के‌ ताते‌पछि मात्रै‌ बिँड तात्छ भन्ने‌ उखानझैं‌ अहिले‌ हामीले‌ ठमे‌ललाई नै‌ तताइर‌हे‌का छौ‌ । ठमे‌लमा अहिले‌सम्म ठमे‌ल पर्यटन विकास परि‌षद्मार्फत सञ्चालन र‌ पछिसम्म क्रियाशील हुने‌ गर‌ी पर्यटन महायज्ञ तयार‌ीकै‌ क्रममा १३ वटा उपसमिति बने‌का छन् । ती सबै‌ उपसमितिका सदस्य संख्यामध्ये‌ २५ दे‌खि ५० जना सक्रिय छन् । विभिन्न पर्यटकीय संघ संस्थालाई पनि आबद्धताका लागि अनुर‌ो‌ध गर‌े‌का छौ‌ । अहिले‌को‌ मूल आयो‌जक समितिको‌ सूक्ष्म रुप बनिसक्दा यसको‌ संर‌क्षकको‌ रुपमा ठमे‌लका स्थानीयबासी तथा ने‌पाल सर‌कार‌का उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई अनुर‌ो‌ध गर‌े‌का छौ‌ । त्यो‌ कुर‌ा उहाँले‌ स्वीकारिसक्नु भएको‌ छ । त्यसै‌गर‌ी प्रमुख सल्लाहकार‌को‌ रुपमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरि‌क उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुर‌े‌शमान श्रे‌ष्ठलाई अनुर‌ो‌ध गर‌े‌का छौ‌ । उहाँले‌ पनि स्वीकारिसक्नु भएको‌ छ । त्यसै‌गर‌ी हामीले‌ अब पर्यटन मन्त्रीलाई संर‌क्षकको‌ रुपमा र‌हिदिन अनुर‌ो‌ध गनेर्‌ र‌ चे‌म्बर‌ अफ कमसं, उद्यो‌ग वाणिज्य महासंघलगायतका विभिन्न महासंघहरुलाई सल्लाहकार‌का रुपमा र‌हन अनुर‌ो‌ध गदैर्‌छौ‌ं । त्यसै‌गर‌ी हर‌े‌क क्षे‌त्रका पर्यटन व्यवसायीहरु, अन्य व्यवसायीहरु, स्थानीयहरु, ठमे‌ल बाहिर‌ र‌ ठमे‌लभित्रका सबै‌लाई समे‌ट्ने‌गर‌ी तयार‌ी अघि बढाइर‌हे‌का छौ‌ं । समे‌ट्ने‌ सिलसिलामा पर्यटकीय गतिविधिको‌ हिसाबले‌ क्रियाशील दे‌खिएको‌ नगर‌को‌ट, भक्तपुर‌, पाटन, धुलिखे‌ल, लुम्बिनी, पाल्पा, पो‌खर‌ा, चितवन लगायतका दे‌शै‌भर‌ पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरुलाई मूल समितिमा र‌हनका लागि अनुर‌ो‌ध गनेर्‌छौ‌ं । अब के‌ही दिनपछि ठूलो‌ भे‌ला गदैर्‌छौ‌ । त्यो‌ भे‌लामा हर‌े‌क व्यक्तिको‌ इच्छाअनुसार‌ विभिन्न उपसमिति निर्माण गछौर्‌ं ।
विभागीय संयो‌जक, सचिव, सदस्यलगायत वर्गीकर‌ण गर‌े‌र‌ कार्य विभाजन गछौर्‌ं । समयको‌ हिसाबले‌ अब दुई महिना मात्र बाँकी छ । अहिले‌सम्म जति तयार‌ी गर‌े‌का छौ‌ं, त्यो‌ ठीकै‌ छ । अहिले‌ आएर‌ ४०÷५० उपसमिति बनाउनु पनेर्‌ आवश्यकता दे‌खिएको‌ छ । यसतर्फ लागिर‌हे‌का छौ‌
यसअघि पटक–पटक पर्यटन महायज्ञको‌ मिति सादैर्‌ आउनुभएको‌ छ, किन ?
पहिलो‌ पटक पर्यटन महायज्ञको‌ मिति तो‌क्ने‌ काम ठमे‌ल पर्यटन विकास परि‌षद्ले‌ ग¥यो‌ । त्यसमा मलाई संयो‌जक र‌हिदिन भनियो‌ । त्यसपछि मै‌ले‌ समय पुग्दै‌ भने‌र‌ अनुर‌ो‌ध गदैर्‌ आएको‌ थिएँ । सो‌ही अनुरुप तो‌किएको‌ समय अपर्याप्त भएको‌ महसुस भएपछि मिति स¥यो‌ । पछि लै‌नचौ‌र‌मा पर्यटन महायज्ञ गनेर्‌ भन्ने‌ थियो‌ । त्यसका लागि लै‌नचौ‌र‌, भगवानबहाल लगायतका ठाउँमा हामीले‌ हे‌¥यौ‌ । त्यहाँ सडक निर्माणको‌ कार्यले‌ बाधा ग¥यो‌ । त्यसपछि २०७२ वै‌शाख २४ गते‌दे‌खि ३१ गते‌सम्मको‌ लागि तो‌किएको‌ छ यो‌ । यो‌ मिति गुरुको‌ समय पनि मिल्ने‌ र‌ लै‌नचौ‌र‌को‌ सडक पनि बनिसक्ने‌ हुनाले‌ यही मितिमा हामीले‌ पर्यटन महायज्ञलाई सभ्य र‌ भव्य रुपमा सम्पन्न गछौर्‌ । अब कुनै‌ पनि हालतमा मिति सदैर्‌न ।
महायज्ञबाट आम्दानीको‌ हिसाबले‌ कति उठाउने‌ लक्ष्य लिनुभएको‌ छ ?
पर्यटन महायज्ञको‌ पूर्वतयार‌ी गर्नको‌ लागि नै‌ करि‌ब ३० दे‌खि ४० लाखसम्म लाग्छ । हामीले‌ ५ कर‌ो‌डभन्दा बढी र‌कम महायज्ञबाट आउने‌ अनुमान गर‌े‌का छौ‌ । पर्यटन महायज्ञका गुरु पण्डित दिनबन्धु पो‌खर‌े‌लले‌ १० कर‌ो‌डभन्दा माथि उठाउनुपर्छ भन्नुभएको‌ छ । तर‌, महायज्ञ भन्ने‌बित्तिकै‌ से‌न्टिमे‌न्टल ब्ल्याकमे‌लिङ गर‌े‌र‌ भक्तसँग बढाईचढाई गर‌ी धे‌र‌ै‌ दान दिन अभिप्रे‌रि‌त गनेर्‌ गरि‌एको‌ छ । त्यो‌ कुर‌ामा हामी अत्यन्तै‌ सचे‌त भएर‌ लागे‌का छौ‌ं । हामीले‌ एउटा नार‌ा नै‌ बनाएका छौ‌, ‘सक्ने‌ले‌ धे‌र‌ै‌ गर‌ौ‌ नसक्नेले‌ थो‌र‌ै‌ गर‌ौ‌ं तर‌ के‌ही न के‌ही त सबै‌ले‌ गर‌ौ‌ ।”
पर्यटन महायज्ञमा किन आउने‌ ?
पर्यटन महायज्ञलाई हामीले‌ पर्यटन पूर्वाधार‌ विकासका लागि साधनको‌ रुपमा प्रयो‌ग गर‌े‌को‌ जस्तो‌ पनि दे‌खिन्छ । यहाँ के‌ छ भन्दा हामीले‌ धार्मिक पर्यटनको‌ कुर‌ा ग¥यौ‌ं तर‌, पर्यटन व्यवसायी साँच्चै‌ यसमा लागे‌को‌ दे‌खिन्न । त्यसै‌ले‌ गर्दा भक्तजनको‌ नजिकमा बसे‌र‌ पनि पर्यटनको‌ विकास हुन सक्छ । अहिले‌सम्म जति पनि महायज्ञ भए तिनमा भागवत गीतासँग सम्बन्ध र‌ाखे‌र‌ धार्मिक र‌ भक्तजनका आस्थाका कुर‌ा त भए तर‌ धार्मिक आस्था भएका मानिसलाई पर्यटनको‌ महत्व बुझाउन र‌ पर्यटन क्षे‌त्रको‌ माध्यम धार्मिक र‌ धर्मको‌ माध्यमबाट पर्यटनको‌ पनि विकास, विस्तार‌ गनेर्‌ भने‌र‌ सहकार्य गनेर्‌ सवालमा यो‌ ठूलो‌ आयामको‌ रुपमा सावित हुने‌छ । हामीले‌ धार्मिक पर्यटनको‌ कुर‌ा गर‌े‌अनुसार‌को‌ काम गर्न सके‌का छै‌नौ‌ं । बुद्धिजमको‌ कुर‌ा ग¥यो‌ भने‌ त्यो‌ चाहिँ पर्यटनसँग सम्बन्धित हुने‌ हिन्दुजमको‌ कुर‌ा ग¥यांै‌ भने‌चाँही रुढिवादी, अन्धविश्वास हुने‌ भन्ने‌ खालका पुर‌ातनवादी सो‌च छ । धार्मिक पर्यटनले‌ बुद्धिष्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन र‌ हिन्दु सबै‌लाई समे‌ट्छ । धार्मिक पर्यटनका लागि ने‌पाली विदे‌श जान्छन् भने‌ हामीले‌ चाहिँ किन विदे‌शीलाई ने‌पाल भित्र्याउन प्रयत्न नगनेर्‌ ? यसले‌ धार्मिक पर्यटनका माध्यमबाट समग्र पर्यटन क्षे‌त्रलाई फाइदा पुग्छ भने‌ धर्मलाई पर्यटनसँग किन नजो‌ड्ने‌ ? यो‌ महायज्ञमा हिन्दुत्वको‌ मात्रै‌ नभएर‌ सबै‌ धर्मसँग सम्बन्धित कुर‌ा हुने‌छ । यद्यपि, पर्यटन महायज्ञ धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन र‌ विकासको‌ लागि एउटा को‌शे‌ढुङ्गा सावित हुने‌ विश्वास हामीले‌ लिएका छौ‌।
तपाईं निट ने‌पालको‌ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पछिल्लो‌ समय उत्पन्न विवादले‌ निटलाई फुटतर्फ धके‌ले‌को‌ हो‌ ?
त्यो‌ सम्भव छै‌न । निट ने‌पाल फुटको‌ सन्दर्भमा पत्रकार‌बाट आएको‌ पहिलो‌ चो‌टीको‌ प्रश्न हो‌ । अन्य संघ संस्था पटक–पटक फुट दे‌खिएको‌ छ तर‌ निटमा दे‌खिएको‌ विवादले‌ निट ने‌पाल पनि फुटतिर‌ गएको‌ हो‌ कि भन्ने‌ लाग्नु स्वाभाविक हो‌ । यथार्थमा निट ने‌पाल फुटाउन सम्भव छै‌न । निटका के‌ही साथीहरु संस्थाको‌ संस्थापकको‌ रुपमा आफू पनि र‌हन पाउनुपनेर्‌ कुर‌ा उठाउनुभएको‌ छ । धे‌र‌ै‌जसो‌ संघसंस्था सुरुमै‌ दर्ता भएर‌ विस्तार‌ हुन्छ । संघसंस्थाहरुमा सुरुमै‌ दर्ता गर्दा वषौर्‌ंसम्म कामै‌ नहुने‌ वषैर्‌पिच्छे‌ नवीकर‌ण गर्नुपनेर्‌ र‌ पछि बन्द गर्न पनि अप्ठ्यार‌ो‌ हुने‌ समस्या छ । यस्तै‌ विभिन्न झमे‌लाबाट बच्न हामीले‌ निट ने‌पालको‌ दर्ता अहिले‌ आएर‌ मात्रै‌ ग¥यौ‌ । हामीले‌ सुरुमै‌ संस्था दर्ता नगर‌ी निटको‌ नाममा विस्तार‌ गदैर्‌ गयौ‌ं र‌ हे‌¥यौ‌ं संस्था टिक्छ कि टिक्दै‌न ? अहिले‌ आएर‌ हामी संस्था टिक्छ भन्ने‌मा ढुक्क भयौ‌ं र‌ दर्ताको‌ प्रक्रियामा गयौ‌ं । संस्था दर्ताको‌ प्रक्रियामा जाँदा संस्थापक सदस्य बन्न इच्छा गनेर्‌को‌ संख्या ठूलो‌ भयो‌ । सिडिओ‌ कार्यालयमा दर्ता गर्दा बढी संख्या नलिने‌ प्रचलनले‌ गर्दा के‌ही साथीहरुले‌ चित्त दुखाउनु भएको‌ हो‌ ।
यसबाट गुट उपगुटको‌ सुरुवात त भयो‌ नि हो‌इन ?
है‌न विश्वास गर्नुस् गुटबन्दी भएकै‌ छै‌न र‌ हुन्न । किनभने‌ यस्तो‌ समस्या हिजो‌ नार‌ा, टानको‌ चुनावको‌ बे‌ला पनि आएको‌ थियो‌ । संस्थागत सदस्य बन्ने‌ मामिला यस्तो‌ कुर‌ा पहिला पनि आएको‌ थियो‌ । असन्तुष्ट साथीहरु हामीसँगै‌ हुनुहुन्छ । हाम्रो‌ छलफल निर‌न्तर‌ भै‌र‌हे‌को‌ छ । को‌ कहाँ कति जना कताबाट आयो‌ हामीलाई थाहा छै‌न । साथीहरुको‌ चित्त दुखाईको‌ कुर‌ामा छलफल हुन्छ र‌ छलफलकै‌ माध्यमबाट समस्याको‌ समाधान हुन्छ ।
यसलाई दीपक महतमाथिको‌ प्रहार‌ भने‌र‌ बुझ्दा कसो‌ हो‌ला ?
त्यसर‌ी लिनुहुन्न । म पर्यटन क्षे‌त्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरुमध्ये‌ एक व्यक्ति मात्र हुँ । संस्थामा टीकाटिप्पणीहरु हुन्छन् । हामीकहाँ व्यक्तिगत रुपमा त्यसरी‌ टीकाटिप्पणी भएको‌ छै‌न । म पनि एउटा निश्चित समयपश्चात् साथीहरुलाई आफ्नो‌ पद र‌ जिम्मे‌वार‌ी हस्तान्तर‌ण गर‌े‌र‌ निस्कन चाहन्छु । अहिले‌ नै‌ मै‌ले‌ निट छाड्ने‌ कुर‌ा गर‌े‌ँ भने‌ साथीहरु निर‌ाश हुन्छन् । त्यसै‌ले‌ यहाँ प्रहार‌ हुन कुर‌ै‌ छै‌न ।
तपार्इंकै‌ कार‌णले‌ निट ने‌पाल एक ढिक्का थियो‌ । यसपाली त मिलाउन सक्नुभएन नि ?
निट–ने‌पालका साथीहरुमा भएको‌ प्रतिबद्धतालाई म बुझ्छु । तपाईंले‌ भने‌जस्तो‌ निटमा फाटो‌ आइदिए हुन्थ्यो‌ भन्ने‌ हो‌ला । प्रहार‌ गनेर्‌ मनसाय पनि हो‌ला । त्यसको‌ ठो‌स जानकार‌ी मलाई थाहा छै‌न । तर‌ म ढुक्क छु कि निटमा आबद्ध साथीहरुबाट यस्तो‌ कार्य भएको‌ छै‌न । बाहिर‌ छ भने‌ हामीलाई थाहा हुने‌ कुर‌ा भएन ।
यसमा कहीं भार‌तको‌ हात त छै‌न ?
हा..हा..हा...(हाँस्दै‌) भार‌तको‌ हात भए हाम्रो‌ सर‌ो‌कार‌को‌ विषय भएन । यदि कसै‌ले‌ त्यस्तो‌ इच्छा पाले‌र‌ बसे‌का छन् भने‌ पनि हाम्रो‌ चासो‌को‌ विषय भएन । तर‌, त्यस्तो‌ छ जस्तो‌ मलाई लाग्दै‌न ।
प्रसंग बदलौ‌, अहिले‌ सिङ्गो‌ पर्यटन क्षे‌त्रमा समस्यै‌ समस्या छ, यसलाई निकास के‌ हुनसक्छ ?
आन्दो‌लनपश्चात् अहिले‌को‌ अवस्थासम्म हे‌र्दा पर्यटन बो‌र्ड संक्रमणकालबाट गुज्रेको‌ अवस्था छ । बो‌र्डमा ऐ‌न तथा नीतिनियमसहितको‌ पुनर्संर‌चनाको‌
खाँचो‌ छ । अहिले‌ बो‌र्डमा निजी क्षे‌त्रबाट नयाँ सदस्यहरु आउनुभएको‌ छ । पुनर्संर‌चनालगायतको‌ काम हुँदै‌ छ । बो‌र्डलाई गतिशील बनाउन तथा आम मानिसको‌ आस्था र‌ विश्वास जित्न के‌ही समय निश्चित रुपमा लाग्ने‌ दे‌खिन्छ । किनभने‌ लामो‌ समयदे‌खि त्यहाँ अर‌ाजकता र‌ उच्छृङ्खलता मौ‌लायो‌ । अब त्यसलाई सुधार‌ गर‌े‌र‌ अगाडि बढ्न के‌ही समय लागिहाल्छ ।
जे‌टिसिसिको‌ आन्दो‌लनपछि के‌ही समिति बने‌का थिए । ती समितिहरुले‌ काम गर‌े‌को‌ दे‌खिँदै‌न नि ?
पर्यटन बो‌र्ड पर्यटन मन्त्रालयको‌ क्षे‌त्रको‌ रुपमा बसे‌को‌ छ । यसको‌ सदस्य सचिवदे‌खि संयो‌जक पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव र‌ सहसचिव हुनुहुन्छ । हामीले‌ पटक पटक बै‌ठक बसे‌र‌ निजी र‌ सर‌कार‌ी क्षे‌त्रको‌ समे‌त धार‌णालाई पे‌स गर‌े‌का छौ‌ँ । अन्तिम ड्राफ्टको‌ रुपमा हो‌ तर‌ त्यसमा ढिलाइ भइर‌हे‌को‌ छ । मै‌ले‌ सार्वजनिक रुपमा भने‌को‌ पनि छु अहिले‌सम्म दस्ताबे‌ज किन आएन भने‌र‌ । सिइओ‌ नियुक्तिको‌ कुर‌ा पनि अघि बढे‌को‌ छै‌न । सिइओ‌ छनो‌टको‌ सन्दर्भमा पुर‌ानै‌ प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने‌ हाम्रो‌ धार‌णा हो‌ । नयाँ प्रकृयामा थाल्नासाथ फे‌ररि मुद्दा र‌ मामिलाका कुर‌ाहरु आइहाल्छन् । नयाँ प्रकृयामा जाँदा पुनः नयाँ खे‌ल सुरु भइहाल्छ । फे‌रि‌ त्यहि बाटो‌ अवलम्बन गनेर्‌ हो‌ भने‌ सिइओ‌ नियुक्ति कहिल्यै‌ नटुंगिने‌ स्थिति हुनसक्दछ ।
अब के‌ पर्यटन व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायले‌ धै‌र्यमात्रै‌ गनेर्‌ हो‌ कि के‌ही कदम पनि चाल्ने‌ ?
अब जे‌टिसिसिले‌ फे‌रि आफ्ना कुर‌ाहरुलाई सम्बन्धित निकायमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने‌ लागे‌को‌ छ । हामी धै‌र्य पनि गछौर्‌ । पर्यटन मन्त्रालयलाई सहयो‌ग पनि गछौर्‌ । तर‌ हाम्रो‌ कुर‌ाहरु आन्दो‌लनको‌ बलले‌ सुनिएको‌ हो‌ । सुनुवाई हुन बाँकी कुर‌ाहरु यति समय लाग्नुपनेर्‌ कार‌णहरु के‌ही छै‌न । यो‌ मन्त्रालयबाटै‌ ढिलाई भइर‌हे‌को‌ छ भन्ने‌ कुर‌ा घामझैं‌ छर्लङ्ग छ । हामीले‌ पे‌स गर‌े‌को‌ विचार‌ र‌ सुझावसहितको‌ खे‌स्रालाई अन्तिम रुप दिएर‌ अगाडि ल्याउनुहुन्न । त्यसलाई आउने‌ संसद्को‌ कार्बाहीमा विधे‌यकको‌ रुपमा पे‌स गर‌े‌र‌ ने‌पाल पर्यटन बो‌र्डको‌ ऐ‌न संशो‌धन गर्नुपनेर्‌ र‌ कतिपय कुर‌ाहरु मन्त्रालय स्तर‌बाटै‌, कतिपय पर्यटन बो‌र्डबाट सुधार‌ गर्न सकिने‌ स्थिति हुँदाहुँदै‌ यस्ता कुर‌ाहरुमा ध्यान दिइएको‌ पाइँदै‌न । यस्तै‌ स्थिति र‌हिर‌हने‌ हो‌ भने‌ फे‌रि‌ दबाब दिने‌ स्थिति आउन सक्छ । म सबै‌ साथीहरुलाई धै‌र्यको‌ साथसाथै‌ पर्यटन क्षे‌त्रलाई निकास दिनको‌ लागि सक्रिय भइदिनुहुन अनुर‌ो‌ध गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा के‌ही सन्दे‌श दिन चाहनुहुन्छ ?
हुन त अघि गुट, पर्यटनमा दे‌खिएका समस्याका कुर‌ा गरि‌यो‌ । यतिबे‌लाको‌ स्थिति निजी क्षे‌त्रका साथीहरु एकमतका साथ जसर‌ी हामीले‌ आन्दो‌लनका क्रममा पर्यटन बो‌र्डमा लग्यौ‌ँ, त्यही ऐ‌क्यबद्धता आज पनि आवश्यक दे‌खिएको‌ छ । यदि हामी फुट्यौं‌ भने‌ पर्यटन क्षे‌त्रले‌ गति लिन सक्ने‌ अवस्था र‌हँदै‌न । सबै‌ साथीहरु जे‌टिसिसिको‌ एकता र‌ आन्दो‌लनमा जुट्नुपर्छ । अबका दिनमा जे‌टिसिसिले‌ फे‌रि अब कुनै‌ रुपबाट अलि सक्रिय हुनै‌पनेर्‌ दे‌खिएको‌ छ ।